Progressive Stampings - China QiDi Plastic Ikubumbe
Sokunyathela Progressive i zenkcenkce indlela ukuba kuquka Ukuhlukunyezwa , ukwakhiwa , eguqa kunye nezinye iindlela ezininzi ze alungise metal izinto zokwenza imveliso, idityaniswe nenkqubo lweehagu oluzenzekelayo.
Inkqubo ibele siqhuba isiqwenga yesinyithi (njengoko unrolls ukusuka coil) kuwo onke izitishi ye sokunyathela kufa eqhubela phambili. Kwisikhululo ngasinye owenza imisebenzi enye okanye ngaphezulu de inxalenye ogqityiweyo senziwa. Isikhululo lokugqibela ngumsebenzi umda, leyo esahlula inxalenye ogqityiweyo ukusuka web ethwele. Le web ekuthwaleni, kunye ngentsimbi into egqojozwe kude kwimisebenzi engaphambili, iphathwa njenge ezilahliweyo metal . Zombini bayakube kude, wokugiliswa (okanye liphuma iyafa) uze betekisi kwisethi kufa, yaye imveliso mass basoloko zidluliselwe imigqomo kuyekwe nge ezilahliweyo ngokufihlakeleyo eziphathekayo amabhanti okuhambisa.
I okuqhubekayo sokunyathela kufa ibekwe ibe Buyisela bexhentsa cinezela . Njengoko cinezela ihambisa phezulu, zibhubha phezulu ihamba nayo, oluvumela eziphathekayo ukuze ondle. Xa cinezela ihambisa phantsi, zibhubha ulivala owenza lo msebenzi bexhentsa. Ekutyhwakrazeni ngalinye eendaba, inxalenye ezaliswe liyasuswa esifa.
Ekubeni umsebenzi olongezelelweyo wenziwa ngalinye "kwisitishi" ye zibhubha, kubalulekile ukuba zephetshana kusinikwa kanye kakhulu kangangokuba oko ungqinelana phakathi kumawaka ezimbalwa intshi njengoko ihamba ukusuka kwisikhululo ukuya kwisikhululo. Bullet emise okanye "yabaqhubi" etsobhileyo ufake imingxuma ngeenxa zonke ababuleweyo ngaphambili kwi zephetshana ukuqinisekisa le ulungelelwaniso ukususela indlela lokutyisa ikholisa ukunika indlela ngendlela eziyimfuneko ubude feed.
Sokunyathela Progressive nayo kuveliswa kwi kudluliselwa oomatshini. Ezi oomatshini ukuba ukubugqithisa izakhi ukusuka kwisikhululo enye ukuya elilandelayo nokusetyenziswa 'iminwe' mechanical. Kuba imveliso mass of iinxalenye isitampu yeyiphi zifuna nzima ngo-ucofe imisebenzi, kusoloko kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe kumatshini eqhubela phambili. Enye yezinto ezilungileyo olu hlobo cinezela lixesha mjikelo wemveliso. Kuxhomekeka phezu inxalenye, neziveliso ngokulula ukubaleka iinxalenye kakuhle phezu 800 / minute. Enye ezingalunganga olu hlobo cinezela kukuba akukho ezifanelekileyo ngqo eliphezulu umzobo nzulu leyo xa ubunzulu sokunyathela lingaphaya ubukhulu yenxenye. Xa kuyimfuneko, le nkqubo yenzelwa phezu cinezela transfer, ibaleke ngesantya esisezantsi, nayama iminwe mechanical ukubamba icandelo endaweni ngethuba lonke lomjikelo bokwakha. Kwimeko kumaphephandaba wenkqubela, kuphela yinxalenye yomjikelo zokubumba abanokuncedwa spring zilayishwe enemikhono okanye efanayo, nto leyo ebangela concentricity kunye ovality nemiba kunye non iyunifomu ubukhulu eziphathekayo. Ezinye lobubi oomatshini inkqubela xa kuthelekiswa ukudlulisela imishini: yandisa impahla ekrwada igalelo efunekayo ukutshintshela iindawo, izixhobo ezo zibiza kakhulu ngakumbi ngenxa yokuba benziwe iibhloko kunye ngokommiselo encinane kakhulu elizimeleyo station nganye; nakwenzeka ukwenza iinkqubo zipapashwa ezifuna inxalenye ushiye zephetshana (umzekelo ukwenza iintsimbi, necking, ukugoba esisangqa, ngomsonto ngokuthimba , rotary sokunyathela njl).
Iyafa zidla ezenziwe isixhobo sentsimbi ukumelana ekulayisheni umothuko ezixhomisa, awuthintele ayimfuneko elibukhali elidlula, ichase esirhabaxa imikhosi ababandakanyekayo.
Iindleko kumiselwa inani iimpawu, leyo ukumisela kufuneka kusetyenziswa into tooling. Kucetyiswa ukuba ukugcina iimpawu ezilula kangangoko ukugcina iindleko tooling ukuya ubuncinane. Iimpawu ngokusondelelana ukuvelisa ingxaki kuba kunganiki kugqitywe ngokwaneleyo ukuba umthwalo, leyo kunokubangela kwenye isikhululo. Kwakhona yingxaki ukuba ukusika ezivaliweyo lunamaqoqo.
Umzekelo obalaseleyo udibaniso swa ngokuqhubekayo na isiciko a yesiselo itoti . Tsala thebhu senziwe kwenye inkqubo sokunyathela phambili kwaye isiciko & ibandla senziwe kwenye, tsala tab ngaxeshanye lusidla kwindawo esinekona sasekunene kwi isiciko & ibandla inkqubo.